Uhlu Lokuhlola Lokwakha Nokumaketha Isicelo Sakho Seselula | Martech Zone
Uhlu Lokuhlola Lokwakha Nokumaketha Isicelo Sakho Seselula
NgoMgqibelo, Agasti 1, 2020 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 Douglas Karr
Abasebenzisi bohlelo lokusebenza lweselula bavame ukuzibandakanya ngokujulile, bafunde izindatshana eziningi, balalele ama-podcast, babuke amavidiyo, futhi bahlanganyele nabanye abasebenzisi. Akulula ukuthuthukisa umuzwa weselula osebenzayo, noma kunjalo!
Uhlu lokuhlola oluyizinyathelo eziyi-10 lokwakha nokumaketha uhlelo lokusebenza oluyimpumelelo imininingwane yesenzo esidingekayo - isinyathelo ngesinyathelo kusuka kumqondo wohlelo lokusebenza ukuqalisa - ukusiza izinhlelo zokusebenza ukufinyelela amandla azo aphelele. Isebenza njengemodeli yebhizinisi yabathuthukisi kanye nethemba lokudala, i-infographic yakhiwe ngamanothi ayisisekelo nezindawo zokuhlola ezisebenzayo kanye namathiphu empumelelo ejwayelekile.
Uhlu Lokuhlola Lokusebenza Kwamaselula lubandakanya:
Isu Lokusebenza Kwamaselula - igama, ipulatifomu nokuthi ufisa kanjani ukwenza imali ngayo.
Ukuhlaziya Ukuncintisana - ngubani okhona lapho, benzani futhi abenzi ini engahlukanisa uhlelo lwakho lokusebenza lweselula?
Ukusethwa Kwebhusayithi - uzolukhuphula kuphi uhlelo lokusebenza, ubeke izinkinobho zabasebenzisi beselula, noma ufake imininingwane ye-meta ekhombisa uhlelo lwakho lokusebenza?
Ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza - ungakusebenzisa kanjani ukwakheka komsebenzisi nedivayisi bese ukuhlanganisa nomphakathi?
Ukuhlolwa Komsebenzisi Weselula - khipha inguqulo ye-beta ngokusebenzisa ithuluzi elifana ne- I-TestFlight ukukhomba izimbungulu, cela impendulo, nokubuka ukusetshenziswa kohlelo lwakho lokusebenza.
Ukusebenziseka Kwesitolo Sohlelo Lokusebenza - izithombe-skrini nokuqukethwe okunikeza esitolo sohlelo lokusebenza kungenza umehluko omkhulu ekutheni abantu bayayilanda noma cha.
Abasunguli Bokumaketha - Yimaphi amavidiyo, ama-trailer, izithombe nama-infographics ongasabalalisa okukhuthaza uhlelo lwakho lokusebenza lweselula?
Imisebenzi Yezokuxhumana Komphakathi - Kungenzeka ukuthi bengivele ngibize le phromoshini futhi ngayihlanganisa nabasunguli, kepha udinga ukwabelana ngamakhono ohlelo lokusebenza kaningi kwezenhlalo… lapho uzothatha khona abasebenzisi abaningi.
Cindezela i-Kit - Ukukhishwa kwabezindaba, izithombe-skrini, iphrofayili yenkampani nezinhlu eziqondisiwe zamasayithi ukutshela ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza selufikile!
Isabelomali Sezokumaketha - Ubunebhajethi yentuthuko… sithini isabelomali sokumaketha sohlelo lwakho lokusebenza?
Lolu uhlu lokuhlola oluhle kepha kunezinyathelo ezimbili ze-CRUCIAL ezingekho:
Ukubuyekeza kohlelo lokusebenza - Ukucela ukubuyekezwa okuvela kubasebenzisi bakho bohlelo lokusebenza leselula hhayi nje kuphela ukuthi kuzokusiza ukuthi uthuthukise futhi uthuthukise uhlobo olulandelayo lohlelo lwakho lokusebenza, kuzophinda futhi kukhuphule uhlelo lokusebenza olukhulu phezulu kwamazinga wohlelo lokusebenza lweselula.
Ukusebenza kohlelo lokusebenza - Ukuqapha ukusebenza kohlelo lwakho lokusebenza nge Uhlelo lokusebenza u-Annie, Amabhuku & Amaphatho Amahlaya, noma I-AppFigures ukuqapha izinga lakho, ukuncintisana, ukwenza imali, nokubuyekezwa kubalulekile ekuthuthukiseni ukusebenza kohlelo lwakho lokusebenza lweselula.
Tags: uhlelo lokusebenza annieukwengezayakha uhlelo lokusebenza lweselulauhlu lokuhlolaimakethe uhlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselulaizinkinobho zohlelo lokusebenza lweselulaukuhambisana kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula ukuhlaziywa ngokuncintisanaukwakhiwa kohlelo lokusebenza lweselulaisabelomali sohlelo lokusebenza lweselulaukwenza imali kohlelo lokusebenza lweselulaipulatifomu yohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula lokucindezela ikhithiuhlelo lokusebenza lweselula sdkuhlelo lokusebenza lweselula ukuhlanganiswa komphakathiUkusebenziseka kwesitolo sohlelo lokusebenza lweselulaamakhasi wesitolo sohlelo lokusebenza lweselulaisu lohlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselulaamandla okuzivocavocaisivivinyo